WinUtilities Pro 15.2 Crack + Popular omningi osemqoka kanye Ikhodi 2018 [ihlolwe]
Ikhaya » Crack & activators » WinUtilities Professional Edition 15.2 Crack
ngu Anastasiya Libra | Februwari 8, 2018
WinUtilities Professional Edition 15.2 Ukuqhuma kuyinto imiklomelo ukuqoqwa amathuluzi nokwandisa futhi ukusheshisa ukusebenza ikhompyutha yakho. Leli thuluzi siqukethe Izinsiza ukuze kuhlanzwe amafayela esikhashana on disk akho, lokubhalisa, ukusula yakho Inthanethi kumlando wesiphequluli futhi isicelo, isilondolozi, namakhukhi. WinUtilities Pro Crack futhi isekela ukuze defragment oshayelayo disk yakho kanye ebhukwini ukuthuthukisa ukuzinza PC yakho futhi ukusebenza. Esakhelwe ngaphakathi Ukuqalisa Acashile ikuvumela ukuba uphathe uqalisa izinhlelo ukulayisha ngokuzenzakalela ne amawindi, silungise izinqamuleli eziphukile, thola amafayela ziphindaphindwe futhi ukhiphe isofthiwe ezingadingeki. Ezinye izimpawu zihlanganisa ifayela evikelekile ekususweni, bavuselele bin shredding, imisebenzi yesondlo ukuhlela nokubuya idatha.
Ukusebenzisa WinUtilities Professional Edition Ukuqhuma & ikhodi ilayisensi pro nokwandisa uhlelo lwakho kuqondile kakhulu futhi kulula. I amamojuli noma izici ungakhetha zihlanganisa Registry, inkumbulo esivimba, defrag, idiski defrag, wezindlu sokuqalisa, futhi BHO Remover. Ngayinye yalezi amamojuli has amathemba okwengeziwe uma ukhethe kubo. Memory Optimizer, Ngokwesibonelo, izokunikeza idatha kanye izixazululo CPU yakho futhi RAM zikuvumela ukulawula izilungiselelo zakho ukusebenza esivimba.
WinUtilities Professional Edition 15.2 Ukuqhuma has a kokuchofoza okukodwa yesondlo umsebenzi esikuvumela enze nokugcinwa eziyisisekelo noma eziphambili endaweni emaphakathi. Tindzima kubalulekile zihlanganisa bethulula izinhlobo eziningi amafayela ezifana amafayela esikhashana, amakhukhi Inthanethi, okungenamsoco amafolda, Umlando internet nokwenza scan esheshayo ebhukwini uhlelo. Imisebenzi eziphambili ingahlaziya futhi defragment Registry, ahlahlele abuye defragment yeflophidiski, futhi ahlaziye kanye ukulungisa ayivumelekile Registry amaphutha kanye okufakiwe. I kokuchofoza okukodwa inkinobho yesondlo eziyosebenza yimiphi amathuluzi ofisa ngokulandelana bese sikunika ukuthi ukhethe ukuthi ungathanda ukulungisa amaphutha. Ungakwazi futhi ukuhlela disk yokuhlanza; umlando yokuhlanza, ebhukwini yokuhlanza kanye disk defragging ngokuzenzakalela kusetshenziswa le software PC ukukhanda.
WinUtilities 15 Pro Crack & patch Izici
WinUtilities Professional Edition 15.2 Ukuqhuma ihlanganisa disk defrag futhi ehlanzekile, ebhukwini ihlanzekile & defrag, uhlelo nokwenza, yobumfihlo shanela, Lungisa ukunqamulela, idiski nokwenza, okungenamsoco amafayela ihlanzekile, futhi nokuningi, ukuze kuqinisekwe PC yakho ukugijima njengabanye entsha.
It kukunika umuzwa omusha khompuyutha.
Awudingi ukuba uchwepheshe noma bazi konke ngama-computer. Odinga ukukwenza nje ukuyifaka, futhi ngokuchofoza izinkinobho ezimbalwa uzokwenza uyayijabulela entsha PC umuzwa futhi.
ukusebenza kangcono PC yakho ngomsebenzi wakho noma ukudlala amageyimu.
Hlanza futhi Lungisa PC Izinkinga One-Chofoza
Fast and Inamandla Windows Clean.
Sekela zonke izinguqulo ze-Microsoft Windows.
Indlela Crack WinUtilities?
Download win Izinsiza lochwepheshe 15.0 isethaphu nokhiye
Fakela Isethaphu Ulande njengamaphayona avamile ukufaka
Software Gijimani Software
okhiye yomkhiqizo readme.txt evulekile & Bhalisiwe iSofthiwe.
Qala ukusebenzisa sohlelo Ukuqhuma & Kujabulele.
← Avast SecureLine VPN Ilayisensi 2018 Wondershare Isiqophi Converter 10.2.2.161 Ultimate Ukuqhuma + Key →